SBS – Networks – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Penthouse 2: War in Life (2021) Unicode ဟယ်ရာနန်းတော်လို့တင်စားလောက်တဲ့ အထပ်၁၀၀ပါသော ဇိမ်ခံမိုးမျှော်အိမ်ကြီးမှာဆိုရင် များစွာသော လျို့ဝှက်ချက်တွေ ၊ မမြင်နိုင်သော ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ် ရှင်းဆူယွန်း ဟာ ဆိုရင် ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ မွေးဖွားလာသူတစ်ယောက်ပေါ့ မိုးမျှော်အိမ်ကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဆိုးလည်း မမှားပါဘူး ချောင်းဆောဂျင်က တော့ သူ့သမီးလိုအပ်တာမှန်သမျှကို ဖြည့်ဆီးပေးနေသူပါ အိုယွန်းဟီ ကတော့ ဘဝပေးအခြေပနေကြောင့် ဆင်းဆင်းရဲရဲ မွေးလာပေမယ့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကြီးမားတဲ့သူ... ဒီလိုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲ.... ချမ်းသာမှု့ ၊ အာဏာ နဲ့ များစွာသော အရှုပ်တော်ပုံတွေ ဖြစ်တည်ရာ အထပ်၁၀၀ မိုးမျှော်တိုက်ဟယ်ရာနန်းတော်ပါ Credit Review Zawgyi ဟယ္ရာနန္းေတာ္လို႔တင္စားေလာက္တဲ့ အထပ္၁၀၀ပါေသာ ဇိမ္ခံမိုးေမွ်ာ္အိမ္ႀကီးမွာဆိုရင္ မ်ားစြာေသာ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ ၊ မျမင္ႏိုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ႏွက္လို႔ေနပါတယ္ ရွင္းဆူယြန္း ဟာ ဆိုရင္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ေမြးဖြားလာသူတစ္ေယာက္ေပါ့ မိုးေမွ်ာ္အိမ္ႀကီးရဲ႕မိဖုရားတစ္ပါးဆိုးလည္း မမွားပါဘူး ေခ်ာင္းေဆာဂ်င္က ေတာ့ သူ႔သမီးလိုအပ္တာမွန္သမွ်ကို ျဖည့္ဆီးေပးေနသူပါ အိုယြန္းဟီ ကေတာ့ ဘဝေပးအေျခပေနေၾကာင့္ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေမြးလာေပမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႀကီးမားတဲ့သူ... ဒီလိုနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကရင္း ဘာေတြဆက္ျဖစ္သြားမလဲ.... ခ်မ္းသာမႈ႕ ၊ အာဏာ နဲ႔ မ်ားစြာေသာ ...
Delayed Justice (2020) Complete Unicode park tae yaung ဆိုတာရှေ့နေတစ်ယောက်….သူက အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကနေ ဥပဒေစာမေးပွဲဖြေလာတဲ့သူဆိုတော့ တခြားဥပဒေကျောင်းဆင်း ရှေ့နေတွေလို အထင်ကြီးမခံရလို့ လိုက်ရတဲ့အမှုတွေကနည်းမှနည်း… အရည်အချင်းရှိသော်ငြားလည်း ထုတ်ဖော်ခွင့်မရသလိုဖြစ်နေတယ်…တစ်နေ့တော့ အိမ်ရာမဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အသတ်ခံရတာကို လူမှားစွတ်စွဲကြတဲ့အတွက် park tae yaung ကပိုက်ဆံမရလည်း အမှုတစ်ခုအတွက် သူကြိုးစားပြီး တရားခံဟာ လူမှားစွတ်စွဲကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့တယ်….ဒီလိုနဲ့ အခြေခံလူတန်းစားများကြားမှာ ချက်ခြင်း နာမည်ကြီးသွားတယ်…. Park sam soo ဆိုတဲ့ သူက သတင်းထောက်တစ်ယောက်… အိမ်ရာမဲ့အမျိုးသမီးအသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာ ဒီသတင်းထောက်ဟာသူ့အရည်အချင်းကိုထုတ်ဖော်ဖို့ တရားခံအစစ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်… ကြည့်ရတာ တခြားအကြောင်းအရာများစွာ ဒီလူသေမှုနောက်ကွယ်မှာရှိသေးတဲ့ပုံပဲ.. ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး… နာမည်ကြီးဝါရင့်မင်းသားတွေရဲ့ အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ မို့ ခံစားကြည့်ကြပါဦး… Credit Review Zawgyi park tae yaung ဆိုတာေရွ႕ေနတစ္ေယာက္….သူက အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝကေန ဥပေဒစာေမးပြဲေျဖလာတဲ့သူဆိုေတာ့ တျခားဥပေဒေက်ာင္းဆင္း ေရွ႕ေနေတြလို အထင္ႀကီးမခံရလို႔ လိုက္ရတဲ့အမႈေတြကနည္းမွနည္း… အရည္အခ်င္းရွိေသာ္ျငားလည္း ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မရသလိုျဖစ္ေနတယ္…တစ္ေန႔ေတာ့ အိမ္ရာမဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အသတ္ခံရတာကို လူမွားစြတ္စြဲၾကတဲ့အတြက္ park tae yaung ကပိုက္ဆံမရလည္း အမႈတစ္ခုအတြက္ သူႀကိဳးစားၿပီး တရားခံဟာ လူမွားစြတ္စြဲေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့တယ္….ဒီလိုနဲ႔ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားၾကားမွာ ခ်က္ျခင္း နာမည္ႀကီးသြားတယ္…. Park sam soo ...
The Penthouse: War in Life (2020) Season 1 Complete Unicode ဟယ်ရာနန်းတော်လို့တင်စားလောက်တဲ့ အထပ်၁၀၀ပါသော ဇိမ်ခံမိုးမျှော်အိမ်ကြီးမှာဆိုရင် များစွာသော လျို့ဝှက်ချက်တွေ ၊ မမြင်နိုင်သော ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ် ရှင်းဆူယွန်း ဟာ ဆိုရင် ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ မွေးဖွားလာသူတစ်ယောက်ပေါ့ မိုးမျှော်အိမ်ကြီးရဲ့မိဖုရားတစ်ပါးဆိုးလည်း မမှားပါဘူး ချောင်းဆောဂျင်က တော့ သူ့သမီးလိုအပ်တာမှန်သမျှကို ဖြည့်ဆီးပေးနေသူပါ အိုယွန်းဟီ ကတော့ ဘဝပေးအခြေပနေကြောင့် ဆင်းဆင်းရဲရဲ မွေးလာပေမယ့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကြီးမားတဲ့သူ... ဒီလိုနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြရင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲ.... ချမ်းသာမှု့ ၊ အာဏာ နဲ့ များစွာသော အရှုပ်တော်ပုံတွေ ဖြစ်တည်ရာ အထပ်၁၀၀ မိုးမျှော်တိုက်ဟယ်ရာနန်းတော်ပါ Credit Review Zawgyi ဟယ္ရာနန္းေတာ္လို႔တင္စားေလာက္တဲ့ အထပ္၁၀၀ပါေသာ ဇိမ္ခံမိုးေမွ်ာ္အိမ္ႀကီးမွာဆိုရင္ မ်ားစြာေသာ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ ၊ မျမင္ႏိုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ႏွက္လို႔ေနပါတယ္ ရွင္းဆူယြန္း ဟာ ဆိုရင္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ေမြးဖြားလာသူတစ္ေယာက္ေပါ့ မိုးေမွ်ာ္အိမ္ႀကီးရဲ႕မိဖုရားတစ္ပါးဆိုးလည္း မမွားပါဘူး ေခ်ာင္းေဆာဂ်င္က ေတာ့ သူ႔သမီးလိုအပ္တာမွန္သမွ်ကို ျဖည့္ဆီးေပးေနသူပါ အိုယြန္းဟီ ကေတာ့ ဘဝေပးအေျခပေနေၾကာင့္ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေမြးလာေပမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႀကီးမားတဲ့သူ... ဒီလိုနဲ႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကရင္း ဘာေတြဆက္ျဖစ္သြားမလဲ.... ခ်မ္းသာမႈ႕ ၊ အာဏာ နဲ႔ မ်ားစြာေသာ ...
Phantom (2012) Complete Unicode ဇာတ်လိုက်မင်းသားကင်ဝူးဟွန်ကတော့ ရဲဋ္ဌာနရဲ့ရာထူးအမြင့်ဆုံးအရာရှိတစ်ယောက်ရဲ့သားဖြစ်ပြီး ရဲစခန်းရဲ့ အမှတ်အမြင့်ဆုံး ရထားတဲ့သူတယောက်ပေါ့ ဝူးဟွန်ကရဲဋ္ဌာနကို ပထမအဆင့်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီ ရဲတက္ကသိုလ်မှာလဲပထမအဆင့်နဲ့ဘွဲ့ရခဲ့တယ် သူက စုံထောက်အနေနဲ့ ဆိုက်ဘာစုံစမ်းစစ်ဆေးဋ္ဌာနကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ် ပြီးတော့ဆိုက်ဘာလောကမှာပုန်းကွယ်နေတဲ့လျို့ဝှက်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်တယ် အစွမ်းအစနဲ့ ရဲတက္ကသိုလ်မှ အောင်မြင်စွာနဲ့ ဘွဲ့ရယူနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုက်ဘာစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ထဲဝင်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ စုံထောက်ကင်ဟာ ကြွက်နဲ့ကြောင်လိုမျိုး ဆိုက်ဘာ လောကမှာနာမည်ကြီးလာခဲ့တယ် ဟက်ကာတွေကို ခက်ခဲစွာနဲ့ ထောက်လှမ်းတယ် လူလိမ်တွေရဲ့ မရဏမင်းဖြစ်နေခဲ့တယ် အဲ့လို အရာတွေနဲ့ တွဲလုပ်ဖို့ အတွက် သူ့ရဲ့ ပါတနာ ဂီယောင်နဲ့ တွဲလုပ်ခဲ့တယ် ဂီယောင်က သက်သေပြဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ စွမ်းရည်နဲ့ ဖော်ထုတ်တယ်အဲ့အချိန်မှာ ဝူးဟွန်ကလည်း ဆိုက်ဘာလောကရဲ့ လျို့ဝှက်ချက် ကို သိလာတဲ့ အခါ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ ဆိုတာ Credit Review ဒီ Series ကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဇာတ္လိုက္မင္းသားကင္ဝူးဟြန္ကေတာ့ ရဲ႒ာနရဲ႕ရာထူးအျမင့္ဆုံးအရာရွိတစ္ေယာက္ရဲ႕သားျဖစ္ၿပီး ရဲစခန္းရဲ႕ အမွတ္အျမင့္ဆုံး ရထားတဲ့သူတေယာက္ေပါ့ ဝူးဟြန္ကရဲ႒ာနကို ပထမအဆင့္နဲ႔ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီ ရဲတကၠသိုလ္မွာလဲပထမအဆင့္နဲ႔ဘြဲ႕ရခဲ့တယ္ ...
Doctor Stranger (2014) Complete Unicode အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမဲ့ drama ကတော့ SBS က 2014 ခုနှစ်မှ ပြသခဲ့တဲ့ Doctor Strange ဆိုတဲ့ drama ဖြစ်ပါတယ် ။မင်းသား မင်းသမီးတွေကတော့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားပါပဲ ။ အဓိက သရုပ်ဆောင် တွေအနေနဲ့ Lee Jong Suk က Park Hoon အဖြစ်… Jin Se Yeon ( Grand Prince ,The Flower in Prison…) က Song Jae Hee/ Han Seung Heeအဖြစ် … Park Hae Jin (My love from another star,Man to Man …) က Han Jae Joon / Lee Sung Hoon ...
Pinocchio (2014) Complete Unicode ခုတင်မဲ့ကားက 2014 korea မှာထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ Lee Jong suk နဲ့ ကိုရီးယားမင်းသမီးချောလေး Park Shin Hye တို့သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Drama , Romance Series ကာင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ ဇါတ်လမ်းလေးကို ပရိသတ်ကြီးနဲ့ အနည်းငယ်ထိတွေ့ပေးရမယ်ဆိုရင် မင်းသားကီဟာမြောင်ရဲ့အဖေဟာ ပြည်သူ့မီးသတ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ မီးသတ်သမားကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့မှာ မီးလောင်မှု တစ်ခုရဲ့ စနက်ကြောင့် းမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးသေဆုံးကြရပြီး မင်းသားကီမြောင်ဟာရဲ့အဖေအလောင်းကိုရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။ သတင်းထောက် ဆုန်ချာအုတ်က သူများနဲ့အပြိုင်အဆိုင်သတင်းယူရင်း ကီဟာမြောင်ရဲ့အဖေဟာ ဒီကိစ္စအားလုံးကို အစီအစဉ်စွဲခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး သတင်းလွှင့်ခဲ့တဲ့အတွက် ကီမိသားစုဟာ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ.. နေရေးထိုင်ရေးအကျပ်အတည်းတွေ ဖြစ်လာကြရပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဒါဏ်ကြောင့်အမေဖြစ်သူက ကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ပြီးနောက် မင်းသားကီမြောင်ဟာကလဲ ပင်လယ်ထဲကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံစီရင်တဲ့အနေနဲ့ ခုန်ချခဲ့ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အယ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရတဲ့ အဖိုးအိုချွဲဂုန်ဖီဟာ သူ့ရဲ့သေဆုံးသွားတဲ့သားအကြီးဆုံးချွဲဒယ်ပိုနဲ့တူတယ်ဆိုပြီး မင်းသားကို ကျွန်းကလေးတစ်ခုကနေ ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ် အဲ့နောက်မှာအဖိုးအိုရဲ့သားအငယ်နဲ့သမီးချွဲအင်ဟာ တို့ကျွန်းကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်...ချွဲအင်ဟာမှာလိမ်ပြောရင် ကြို့ထိုးတတ်တဲ့ Pinocchio လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါရှိပါတယ်။ ...
TMDb: 8.3/10 334 votes
Legend of the Blue Sea (2016) Complete Unicode ၁၅၈၆ ခုနှစ် မှာ ရွာတစ်ရွာမှာမုန်တိုင်းအသည်းအသန်ကျပြီးတဲ့နောက် ပင်လယ်ပြင်ကနေ ရေသူမ မျိုးဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဟာ မုန်တိုင်းကြောင့် သောင်တင်ခဲ့ပါတယ်..ရွာအုပ်ချုပ်သူက ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပြီး အသစ်ရောက်လာတဲ့ မြို့တော်၀န်ကို၀င့်ကြွားစွာပြသချိန်မှာတော့ မြို့တော်၀န်ဟာသနားပြီး ရေသူမ ကို ပင်လယ်ထဲပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ် မြို့တော်၀န်ရဲ့လက်က အထိန်းအမှတ် ကျောက်စိမ်းလေးကို ရေသူမကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ် နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 430 ကြာတဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ရေသူမလေးဟာမုန်တိုင်းကြောင့်ပဲ ကုန်းမြေပြင်ပေါ်မှာ နောက်တစ်ခေါက်သောင်တင်လာပြန်ပါတော့တယ် ဗိုက်ကလည်းဆာဆာနဲ့တွေ့တဲ့ဟိုတယ်အခန်းထဲခိုး၀င်ပြီး အစားအသောက်တွေခိုးစားခဲ့တယ်.. ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့အခန်းမှာတည်းနေတဲ့သူက ဆိုးလ်မြို့ကနေ ခဏလာရောက်အနားယူနေတဲ့ မျက်လှည့်ပညာရှင် စိတ်ညို့ပညာရှင် တစ်ဦးပါ တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မြို့တော်၀န်လေး ဒန်ယောင်းလူ၀င်စားတဲ့သူပေါ့ ..သူဟာ ရေသူမလေးကို ရဲလက်အပ်လိုက်ပေမယ့် သနားစိတ်လေးကတော့ရှိခဲ့တယ်..ပိုပြီးစိတ်၀င်စားစေတာက ရေသူမလေးလက်က လက်ကောက်ကိုမြင်လိုက်ရတော့ နောက်ကြောင်းစုံစမ်းတဲ့အခါ နှစ်ပေါင်း 400 ကျော်သက်တမ်းကြာပြီး ဒေါ်လာ 6သောင်းလောက်တန်တယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါ ရေသူမလေးကိုပြန်ရှာပြီး ကြင်နာစွာဆက်ဆံပါတော့တယ် ဒီလိုနဲ့ သူတို့တွေဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ဒန်ယောင်းကရော ဘဝဟောင်းကိုမှတ်မိပါ့မလား.ရေသူမလေးကရော သူ့ကိုမှတ်မိပါ့မလား..ကမ္ဘာပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ ရေသူမလေးနောက်ဆုံးမျိုးဆက်လေးဟာလည်း လူတွေနဲ့အတူနေထိုင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပါ။ Credit Review Zawgyi ၁၅၈၆ ခုႏွစ္ မွာ ႐ြာတစ္႐ြာမွာမုန္တိုင္းအသည္းအသန္က်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ပင္လယ္ျပင္ကေန ေရသူမ ...
Doctor John (2019) Complete Unicode ဒီတစ်ခါကတော့ ဆရာဝန် Drama ကားလေးဖြစ်တဲ့ "Doctor John" ဆိုတဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားရဲ့ cast တွေကအားလုံံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ "Kill Me Heal Me, Defendant, Familier Wife" တို့ထဲက "Ji Sung" နဲ့ ဘူဂျာလေး "Lee Se Young" တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားရဲ့ Director ကတော့ Thirty but seventeen, Pinocchico, I can hear your voice ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကိုပုံစံကတော့....... Cha Yo Han (Ji Sung) ကမေ့ဆေးဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက မာနကြီးတယ် အထက်စီးဆန်တယ် ဒါပေမဲ့ သူအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့လုံးဝတော်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူအလုပ်နယ်ပယ်မှာ Genius ဖြစ်တာမိုလို့ "Ten Seconds" ဆိုပြီး ခေါ်ကြပါတယ်တဲ့! သူကကိစ္စတစ်ခုကြောင့် ...
Doctor Detective (2019) Complete Unicode Medical Drama လေးဖြစ်ပြီး MyDrama List မှာတော့ Rating 8.5တောင် ရရှိထားပါတယ်။ မင်းသမီး Park Jin-hee ၊ မင်းသား Bong Tae-Gyu (Return စီးရီးထဲအယုတ်တမာ) ၊ မင်းသား Lee Ki Woo တို့အဓိက ပါဝင်ထားပြီး အပိုင်းအရေအတွက် (16)ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူ့အဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာ လူတွေဖျားနာတွေ၊ မကျန်းမမာဖြစ်လာရခြင်းရဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမှန်တရားကို ဆရာဝန် တွေက ဖော်ထုတ်ပြောပြမဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဂျွန်းအန်းက စက်ရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆမှုတွေကို ဖုံးကွယ်ပေးရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စက်ရုံတွေမှာ ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါတွေ ၊ မတော်တဆမှုတွေ နဲ့ တခြားမတော်တဆမှုတွေနဲ့ဆက်စပ်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါ....... ဂျွန်းအန်းတစ်ယောက်တစ်ယောက် နောက်ကွယ်ကအမှန်တရားကို ရှာဖွေနေိူင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်နော်...... Credit Review Zawgyi Medical Drama ေလးျဖစ္ၿပီး MyDrama List မွာေတာ့ Rating 8.5ေတာင္ ရရွိထားပါတယ္။ ...
The Last Empress (2018) Complete ဒီတစ္ခါေတာ့ ပရိသတ္ေတြကို တင္ဆက္ေပးခ်င္တာက ခြ်ဲဂ်င္ေယာ့၊ ႐ွင္ေဆာင္ေယာ့နဲ႔ ဂ်န္နာရာတို႔ ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ထားၾကတဲ့ အခ်စ္ဒရာမာအမ်ဳိးအစားဇာတ္လမ္းတြဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ကို ေလးပိုင္းႏႈန္းနဲ႔ အပိုင္း ၄၈ ပိုင္းအထိ ျပသမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔နဲ႔ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း SBS ႐ုပ္သံလိုင္းမွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္မွာပါ။ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေလးကေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ တိုင္းျပည္ကို စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အိုေဆာနီ (ဂ်န္နာရာ) ဟာ ထက္ျမက္တဲ့ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိတဲ့ musical မင္းသမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုတ္တရက္ဆိုသလို သူဟာ ဧကရာဇ္ လီေယာ့ (ရွင္ေဆာင္ေယာ့) နဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အိုေဆာနီဟာ နန္းတြင္းရဲ႕ အာဏာကို ဖီဆန္ဖို႔ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိန္မွာေတာ့ ေတာ္ဝင္မိသားစုရဲ႕ ကိုယ္ရံေတာ္ နာဝမ္ရွစ္ (ခြ်ဲဂ်င္ေယာ့)ကိုခ်စ္မိသြားခဲ့ပါတယ္။ နာဝမ္႐ွစ္ဟာ နန္းေတာ္ထဲကို ဝင္လာတာဟာ သူ႔မိခင္ကို သတ္ခဲ့တဲ့သူကို ကလဲ့စားေခ်ဖို႔ ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဧကရာဇ္လီေယာ့ရဲ႕ ဖြားေတာ္ႀကီးနတ္ရြာစံခဲ့တာေၾကာင့္ ...
Divorce Lawyer in Love (2015) ကုိရီးယား ဇာတ္လမ္းတြဲခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ စီးရီးေကာင္းေလးတစ္ခု Divorce Lawyer in Love (2105) Korean television series သည္ AsianWiki 91% ရထားေသာ ဒါရုိက္တာ Park Yong-Soon က ရုိက္ကူးထား၍ Kim A-Jung က ဇာတ္လမ္းဇာတ္ညႊန္းေရးသားကာ သရုပ္ေဆာင္ Ji-hye Kwak, Yeo-jeong Jo, Woo-jin Yeon တုိ႕ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားေသာ 18 episodes ပါရွိသည့္ Comedy, Romance ဇာတ္လမ္းတြဲေကာင္းေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ တင္ဆက္လုိက္ပါရေစ… Ko Cheok-Hee (Cho Yeo-Jeong) သည္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ျပီး အမႈႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ဆုိ ဘာမဆုိလုပ္တတ္သူျဖစ္သည္ So Jung-Woo ကေတာ့ သူရဲ့ ရုံးမန္ေနဂ်ာျဖစ္ခဲ့သည္ Ko Cheok-Hee ရဲ့ အမွားကုိ အျမဲတမ္းေထာက္ျပေနတတ္သည္ သူတုိ႕ ...